काठमाण्डौ जाँदै हुनुहुन्छ ? होस् गर्नुहोला पर्नु होला ठुलो समस्यामा !! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /News/काठमाण्डौ जाँदै हुनुहुन्छ ? होस् गर्नुहोला पर्नु होला ठुलो समस्यामा !!
सवारी पास बनाइहा`लेँ, अब ढुक्कसँग उपत्यका जान्छु भनेर तपाईंले धारणा बनाउनुभएको छ ? या त अब सवारी पास बनाइएर उपत्यका जान्छु भ`न्ने सोच छ । याद गर्नुहोस् ! पास बनाउँ`दैमा अब उपत्यका छिर्न पाउनुहुन्न । नाग`ढुङ्गा, फर`पिङ, मुड्खु`, ज`गाती, जहरसिङ`पौवा या अर्काे कुनै नाकाबाटै फर्कनु पर्ने पनि हुनसक्छ । दुःख मात्रै पाउन सक्ने भएकाले बेलैमा ध्यान पु¥याउनुहोला ?
दैनिक उपभोग्य सामग्री र स्वास्थ्य उपचार सम्बन्धी जोडिएका सवारी बाहेक अब उपत्यकामा ‘नो इन्ट्री’ गरिएको छ । यस अघि पास बनाएपछि निर्वाध रुपमा सवारी भित्रने गरेको थियो । अब भने पास बाहक गाडीलाई समेत धमा`धम फर्काउन थालिएको छ । महा`नगरीय प्रहरी कार्यालय रानी`पोखरीका प्रमुख प्रहरी नायब महा`निरीक्षक विश्व`राज पोखरेलले पास भएकालाई पनि अब अत्यावश्यक बाहेक प्रवेश रोकिएको बताउनुभयो । “दैनिक उपभोग्य सामग्रीसँग र स्वास्थ्य उपचारसँग जोडिएका सवारी आउन पाउँछन्, त्यस बाहेक पास लिएर आए पनि सवारी भित्रि`न पूर्ण निशेष छ ।”
वि`भिन्न नाकाबाट अहिले उपत्यका एक हजार ५०० हारा`हारीमा सवारी भित्रिने गरेका छन् । त्यसमा झण्डै ४०० सवारी पास बोकेर विभिन्न काममा आउने गरेको प्रहरीको अभि`लेख छ । दैनिक उपभोग्य सा`मग्री ल्याउने सवारी समेत बढेको छ । ती गाडीमा चालक सहचालक गरी दुईदेखि तीनजना आउने गरेका छन् । त्यसरी हेर्दा झण्डै चार हजार हाराहारीमा मानिस दैनि`क उपत्यका भित्रिने गरेका छन् । अत्या`वश्यक सा`वारीमा आएकाहरु सामान अन`लोड गरेर बाहिरिने भए पनि अन्य व्यक्तिहरु बाहिरिने गर्दैनन् । त्यसैले पनि कडाइ गरिएको हो ।
विश्वव्यापी महामारीका रुपमा फैलिरहेको कोभिड–१९ सङ्क्र`मणको जोखिम रहेको वर्तमान समयमा अत्या`वश्यक काम बाहेक बाहिर निस्कने अवस्था अहिले होइन । घरमै बस्ने, सा`माजिक दूरी कायम गर्ने र मिचि`मिची साबुन पानीले हात धुने गर्नुपर्छ । तर, बजारमा धेरै मानिस बहाना`बाजी गरेर, पासको दुरुपयोग गरेर हुन्छ या त झुटा विवरण पेश गरेर पास लिने र निस्कने अवस्था छ । त्यसलाई रोक्न प्रहरीले पासमा कडाइ गरेको हो । अनावश्यकरुपमा पास लिएर एक जिल्ला`बाट अर्का जिल्ला र एक प्रदेशबाट अर्काे प्रदेशमा आवत`जावत बढ्न थालेसँगै सङ्घीय राज`धानी काठमाडौँमा पनि बाहि`री जिल्ला`बाट गाडीको चाप बढ्न थालेको प्रहरीको निष्कर्ष छ । जिल्ला जिल्लामा पास बढी बाँड्दा पनि समस्या देखिएको छ । त्यसैले उपत्यका प्रहरी त्यस्ता गाडी रोक्न बाध्य भएको हो ।
नागढुङ्गाको सु`रक्षामा खटिनुभएका प्रहरी नायब उपरीक्षक घनश्याम श्रेष्ठ बहा`ना बनाएर पास लिएर आएका गाडीलाई उपत्यकामा प्रवेश रोकिसकेको बताउनुभयो । “आजमात्रै हामीले ८० वटा गाडी नागढुङ्गा नाकाबाट फर्काइसक्यौँ, यो क्रम जारी छ”, श्रेष्ठले रासससँग भन्नुभयो । उनीहरुले बकाइदाले जिल्लाबाट पास ल्याएका छन् । वास्तविक समस्या के हो ? भनेर सोध्दा, यही हो भनेर प्रष्ट बताउन नसक्नेलाई फर्काइएको छ । बिरामी, काजकिरियामा हिँडेका, अत्यावश्यक काम र पेशा व्यवसायका व्यक्ति सवार गाडी मात्रै पठाउने गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
गृह मन्त्रालयले केही दिनअघि आवागमनमा कडाइ गर्न निर्देशन दिएसँगै अहिले उपत्यका लगायत सम`ग्र मुलुकभरको सुरक्षा व्यवस्थामा थप कडाइ गरिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनलगायत केही जिल्लाले बाहिर जानका लागि पास नदिने निर्णय गरेर सार्वजनिक सूचना जारी गरिसकेको छ । कोरोनाको सङ्क्रमण जोखिमलाई रोक्न यस्तो निर्णय गरिएको जनाइएको छ ।काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहाल उपत्यकाको सीमा नाकामा थप कडाइ थालिएको र सुरक्षात्मक उपायसमेत अपनाउन थालिएको बताउनुभयो । उहाँले वैशाख २५ पछि पनि आवा`गमनलाई रोक्नै पर्ने आवश्यकता रहेको औँल्याउनुभयो ।
कोभिड–१९ को स`ङ्क्र`मण रोक्न मुलुकमा जारी गरिएको बन्दाबन्दी (लकडाउन) को अवधि लम्बिँदै जाँदा काठमाडौँ उपत्यकामा मानिसको प्रवेश बढ्ने अवस्था देखिएको निष्कर्षका साथ प्रहरीले नाका कडाइ थालेको हो । काठमाडौँ उपत्यका प्रवेश गर्ने मुड्खु, जगाती, फर्किङ र जर्सिङपौवा नाका मुख्य छ । वर्तमान अवस्थामा अझै पनि उपत्यका आवाग`मनलाई खुला गर्न नहुने सुरक्षा अधिकारीको समेत निष्कर्ष छ ।